Imizekelo emi-6 yendlela amaShishini abekwazi ngayo ukuKhula ngexesha loBhubhane | Martech Zone
Imizekelo emi-6 yendlela amaShishini abekwazi ngayo ukuKhula ngexesha loBhubhane
NgoLwesibini, Aprili 27, 2021 NgoLwesibini, Aprili 27, 2021 Douglas Karr
Ekuqaleni kobhubhane, iinkampani ezininzi zisika uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso kunye nentengiso ngenxa yokwehla kwengeniso. Amanye amashishini acinga ukuba ngenxa yokuyekiswa kwabantu abaninzi, abathengi bayayeka ukuchitha ukuze uhlahlo-lwabiwo mali nentengiso zincitshiswe. Ezi nkampani zazingela phantsi ukuphendula ubunzima bezoqoqosho.
Ukongeza kwiinkampani ezithandabuzayo ukuqhubeka okanye ukumilisela amaphulo amatsha entengiso, izikhululo zikamabonwakude nezikanomathotholo nazo bezisokola ukuzisa nokugcina abathengi. Iiarhente kunye neefemu zentengiso zingasebenzisa eli thuba ukunceda omabini amacala oyise ubhubhane obangelwe sisifo. Njengoko iSilver Frog Marketing ibonile, oku kungakhokelela kwimikhankaso yentengiso kunye nentengiso eye yanceda ukwandisa amashishini ngexesha lobhubhane. Nantsi indlela amashishini akwazi ngayo ukukhula ngexesha lobhubhane, kunye neendlela zokuzigcina engqondweni ngelixa usakha imikhankaso yentengiso yasemva kwesifo.
Njengamashishini abukele imibhobho yabo iqabaka xa ubhubhane uhlasela, iinkokheli zisebenze ukugcina nokukhulisa ubudlelwane endaweni yokuxhomekeka kumathemba. Iinkampani ezininzi zenze inyathelo lokutyala imali kutshintsho lwedijithali njengoko abasebenzi babo bengasebenzi ngokomthamo kuba kunciphisile ifuthe kuyo yonke imisebenzi. Ngokufuduka nokuzenzekelayo iinkqubo zangaphakathi, iinkampani zikwazile ukuqhuba ngokukuko.
Ngaphandle, ukufudukela kumaqonga awomeleleyo kuvule amathuba okubonelela ngamava aphezulu kubathengi ngokunjalo. Ukuphunyezwa kohambo lwabathengi, umzekelo, kuqhuba ukuzibandakanya, ixabiso, kunye nokuphakamisa amathuba kunye nabathengi abakhoyo ngoku. Zombini iimpembelelo zangaphakathi nezangaphandle zanyanzela ngaphezulu kweedola kwaye zibonelela ngesiseko kwintengiso ye-springboard njengoko uqoqosho lwalubuya.
Thethana ngokuPhela kwangaphambili
Kumaziko kamabonwakude nakunomathotholo, ubhubhane ubangele ukungaqiniseki ngenxa yokutshintsha kohlahlo-lwabiwo mali kunye neenkampani ezirhuqa amaphulo azo okuthengisa. Kwaye kwacaca ukuba iiarhente nezikhululo kufuneka zisebenze kunye ukunceda ukufezekisa iimfuno zabo. Ukusebenza kunye nesikhululo sokuthetha-thethana ngerhafu ngaphambili akunakunceda kuphela isikhululo, kodwa kuluncedo nakwisixhasi sakho.
Ukufumana izinto ezinje ngobungakanani babaphulaphuli kunye neeparitha ezithile zokuthenga ukuya kuthethathethwano olusisiseko lokufumana amaxabiso asezantsi kubo bonke abathengi yinto enokuba yinto ephambili kula maphulo. Nje ukuba wehlise umyinge wakho, iindleko zakho ngempendulo ziya kuncipha kwaye i-ROI yakho kunye nenzuzo ziya kuphakama.
UChristina Ross, umseki-ntsebenziswano weSilver Frog Marketing
Ngokuthetha-thethana ngala maxabiso ngaphambi kokuba uthethe nomthengi, utshixa amaxabiso enkampani ekunokuba nzima ukuba abo bakhuphisana nabo babethe. Endaweni yokuthetha-thethana ngokusekwe kwinkampani ethile, uthethathethwano kwicala elingaphambili lunokunika amaxabiso angakhethi cala kwisitishi kunye nomthengi.
Intlonipho kwaye usete uhlahlo-lwabiwo mali lwenene
Ngexesha lobhubhane, iinkampani zazithandabuza ukubeka ecaleni uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu ngenxa yokungaqiniseki kunye nokuthandabuza ukuba abathengi bazokuchitha imali. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba iinkampani ziqhubeke nokuseta uhlahlo-lwabiwo mali ababelulungele kwaye bebahlonipha njengoko kusungulwa iphulo.
Ngalo lonke ixesha qala ngohlahlo-lwabiwo mali olonwabisayo. Unokwenza oku ngokuhlalutya amaxabiso adlulileyo, amava, kunye noko kukusebenzeleyo kunye nenkampani yakho. Ngokumisela ezi zibenchmark, unokuqonda ngokucacileyo into oyifunayo ukuze uchithe imali ekujoliswe kuyo.
Oku kuqonda kunye nokubamba iincoko ezinyanisekileyo kunye nabaxumi ngexesha lobhubhane kukhokelela kwimpumelelo enkulu. Ngophando lwedatha yentengiso, ukuhlala ngaphezulu kwereyithi kunye nokubamba izikhululo zokuphendula ngexesha labo lokubaleka ukufumana iikhredithi, iinkampani zinokuseka impumelelo enkulu kubaxhasi bazo.
Yiba neShedyuli eguqukayo
Ubhubhane bekunzima kakhulu ukuluhamba kuba yinto engalindelekanga. Asinakho ukuqonda malunga nefuthe elibonakalayo okanye umkhondo wobhubhane ngenxa yokuba asikaze sihambe kule ndlela ngaphambili. Ngeli xesha, kubalulekile ukuba imikhankaso yentengiso ihlale iguquguqukayo.
Kukubhukisha abathengi kuphela iiveki ezimbini, okanye inyanga, ngexesha elinika ithuba lokuguquguquka okufanelekileyo. Oku kuvumela iiarhente ukuba zihlalutye amanani kwaye zithathe isigqibo sokuba zeziphi iimarike, izikhululo, kunye neepartparts ezilungileyo kwaye apho amaphulo abetha khona ukuze ukwazi ukugxila kwabona baphumeleleyo endaweni yokuchitha imali yomthengi wakho.
Olu bhetyebhetye luvumela iinkampani kunye neearhente ukuba zihlale zijikeleza amaphulo azo okufikelela kwi-ROI ephezulu. Njengokuba iindawo ezinzima kakhulu ziqhubeka nokutshintsha kwaye urhulumente abeke iiparameter malunga nokuvulwa kwakhona, ukuvumela umkhankaso wakho ukuba ube nokuguquguquka okungagungqiyo kwenza ukuba idola yakho yentengiso iqengqeleke ngamanqindi angalindelekanga esijongene nawo ngoku. Amaphulo amileyo kunye namaxesha amade aya kumosha iidola zentengiso kwaye zikhokelela kwimpendulo esezantsi ngeendleko eziphezulu kwifowuni nganye.
Iindawo ekujoliswe kuzo zoSuku
Ngexesha lobhubhane, abanye abathengi babedilizwa ngelixa abanye besebenza ekhaya.
Ngamanye amaxesha abathengi banenkxalabo encinci malunga nokusasaza emini ngenxa yengcinga ephosakeleyo yokuba bonke abantu ababukele iTV emini abaphangeli. Yayiyinyani leyo nangaphambi kobhubhani, kodwa ngoku kuncinci kakhulu kubantu abaninzi abasebenza emakhaya. ”
USteve Ross, umseki-ntsebenziswano weSilver Frog Marketing
Ngabantu abaninzi ababukele umabonwakude kwaye bemamele unomathotholo, iindleko ngefowuni nganye zehlile. Uninzi lwabantu lwalusekhaya oko kuthetha ukuba abantu abaninzi babebona intengiso yemveliso kwaye bengena.
Kubalulekile ukuba uthathe ithuba lokufumana indawo kuba abaphulaphuli bayaqhubeka nokutshintsha. Ngokucofa aba baphulaphuli batsha, imveliso yakho iya kubekwa phambi kwabantu abaninzi abakwaziyo ukutyala imali. Ikwavumela ukufikelela kwabo unganakho ukufikelela kubo bhubhane ngenxa yeeshedyuli zomsebenzi oxakekileyo kunye nokubukwa okuphantsi ukusuka kubemi abathile.
Phuhlisa iiTactics zokulinganisa ngokukodwa
Xa abathengi bephendula kwimikhankaso yentengiso, ukubuza nje ukuba babone phi kwintengiso kunokuba yingozi. Kungenxa yokuba ixesha elininzi, umthengi ujolise kwimveliso kangangokuba angakhumbuli ukuba wayibona phi. Oku kunokukhokelela kwingxelo elahlekisayo ngaphandle kwesiphoso somthengi.
Ukunceda ukulinganisa intengiso, kungcono ukusebenzisa inombolo eyi-800 kuyo yonke intengiso. Ungazidibanisa kwaye la manani ahanjiswe kwiziko elifanayo lokufowuna ukulungiselela umthengi wakho. Ngokubonelela ngenani lokwenyani lentengiso nganye, unokulandela ukuba zivela phi iifowuni kwaye uvelise iingxelo ezichanekileyo. Ngale ndlela, uyazi kakuhle ukuba zeziphi izikhululo ezixhamla umthengi wakho kakhulu ukuze uqhubeke nokunciphisa imithombo eyimpumelelo yengeniso kunye nokwakha i-ROI.
La manani angaluncedo xa uqonda ukuba zeziphi izikhululo kunye neemarike zomkhankaso wakho ekufuneka uqhubeke nokujolisa kuwo. Ngokungabinayo imilinganiselo echanekileyo yokuphendula, ayinakulimaza iphulo lakho kuphela, kodwa ikwenzakalise nohlahlo-lwabiwo mali lwakho lwentengiso.
Ngelixa ukuthengisa kweSilver Frog kujongana namashishini amaninzi ebengazi ukuba aza kusinda na kubhubhane, baqhubekeka nemizamo yokuvelisa impumelelo yabo yangaphambili. Ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali lwabathengi olukhulayo ngama-500%, ukwehla kweendleko zabaxumi ngempendulo nganye ngama-66%, benza ukuba amashishini anyuse ingeniso kwaye abuyele kutyalo-mali ngexesha lokuphakama kwesifo; lonke elixa besebenzisa imali encinci kunangaphambili.
Okwangoku, kubalulekile ukuba iinkampani ziqhubeke ukubhengeza ukubuyela kuyo nayiphi na ilahleko kwaye ziqhubeke nokukhula.
Ukuba wena okanye inkampani yakho ungathanda ukufunda okungakumbi malunga neengcebiso kunye namacebo okuphucula imikhankaso yentengiso ngexesha lobhubhane, ndwendwela Ukuthengiswa kweFrog yesilivere Website.
tags: ezithengisalwabiwo maliUkukhula kweshishiniintsholongwane ye-Coronautshintsho lwe digitalumnothoishedyuli eguqukayobhubhaneuhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisaukulinganiswa kwentengisouthethathethwano ngentengisoishedyuli yokuthengisaekujoliswe kwiindawo zokubeka emini
Meyi 6, 2021 kwi-5: 46 AM
Ubhubhane uthinte ishishini nzima kakhulu. Kodwa abo bakwaziyo ukuziqhelanisa neemeko ezintsha bachasa. Inomdla kwaye iyafundisa. Enkosi!